Mari-nehupfumi, 17 Kukadzi 2019
Svondo 17 Kukadzi 2019
Kukadzi 16, 2019
ZCTU Inoti Vasori Vari Kuvhiringa Basa Rayo
Sangano rinomiririra vashandi, reZimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU), rinoti basa ravo ririkuvhiringwa nevasori uye vatungamiri vavo vari kutyityidzirwa.
Kukadzi 15, 2019
Masangano emakereke muZimbabwe arikuramba mashoko ekuti arikushandiswa nedzimwe nyika kukonzera kusagadzikana munyika nechinangwa chekuda kubvisa hurumende pachigaro.
Gurukota rinoona nezvemutemo VaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo uri kuda kudzikwa nehurumende kudzivirira kufambiswa kwemari zvechikiribidi kana kuti Money Laundering wakanangana nekuzadzikisa zvisungo zvemitemo yepasi rino inodzivirira mabasa evanopfurikidza mwero.
Paramende yemubatanidzwa weEuropean Union nezuro wakaburitsa gwaro rine mashoko akasimba zvikuru ekukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvise nekukasika mauto nevechidiki vanonzi vari kushungurudza vanhu vachityora kodzero dzevanhu dzakatarwa nebumbiro remitemo yenyika.
Varairidzi Voronga Kudzokera Mukuramwa Mabasa Zvichitevera Kusaitwa kweMusangano
Munyori musangano revarairidzi reProgressive Teachers’ Union of Zimbabwe, VaRaymond Majongwe, vanoti hurumende, kuburikidza negurukota rezvedzidzo, Muzvinafundo Paul Mavima, yakanga yavavimbisa kuti vachasanga pakati pesvondo rino kuti vapedzese nhaurirano dzavakatanga svondo rapera.
VaMthuli Ncube Voendeswa kuMatare Nhasi neNyaya yeMutero Wavakadzika
Gweta riri kumirira VaMlilo, VaTendai Biti vanoti VaMlilo semurwiri wekodzero dzevanhu havadi kuti hurumende iite madiro aJojina.
Hurumende Yoshorwa neKukundikana Kuumba Komiti Inoongorora Mauto, Mapurisa neVasori
Asi gurukota rezvemutemo VaZiyambi Ziyambi varamba kuti hurumende iri kudya manonoko vachiti pane zvimwe zvakakosha zvayange ichiita zvakafanana nesarudzo .
Kukadzi 11, 2019
Hurumende Inoramba Mashoko eKuti iri Kuparura Mari Itsva yeNyika Svondo Rino
Hurumende pamwe nagavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Doctor John Mangudya, varamba mashoko ekuti nyika iri kuparura mari yayo svondo rino.
Boka rekwaRegistrar-General Roronga Kuvhura Mahofisi emaPasipoti kwaMurehwa neChitungwiza
Mabharani mukuru wenyika kana kuti Registrar General, VaClemence Masangano, vazivisa kuti mahofisi avo achavhura mahofisi emapasipoti kuChitungwiza munguva pfupi inotevera senzira yekuderedza mitsetse yemapasipoti muHarare.
Kudhura kweMishonga Kwotambura Vane Zvirwere zveHupenyu Hwese
Vamwe vanhu vanorarama nezvirwere zvehupenyu hwese vanoti havachanwi mishonga yavo mazuva ese sezvavanenge vaudzwa navanachiremba vavo, sezvo mishonga iyi yave kudhura uye yotengeswa nemari yemadhora ekuAmerica iyo vanoti havana.
Vaimbove Mutevedzeri weMutungamiri weNyika, VaMphoko Votsvagwa neZACC
Ishe Ndiweni Vopikisa Kuendeswa Kwavo kuJeri
Magweta Oumba Sangano Rekusungisa VanaChiremba Vanokundikana Basa
Bhiri reKuvandudza Mutemo weAIPPA Roparurwa
Dare Rorambidzazve MDC Kuratidzira kuBulawayo Uko Kwazadzwa Mauto neVasori